ဘာကြောင့်ဂူဂဲလ်လျှို့ဝှက်သော့ချက်စာလုံးများသည်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက်အလွန်ကောင်းသနည်း Martech Zone
လူတိုင်းက Google နှင့်ပတ်သက်ပြီးညည်းသံများကြားနေရသည် အော်ဂဲနစ်သော့ချက်စာလုံးဒေတာများကိုမပေး Analytics မှ၌တည်၏။ ငါယုံကြည်နေစဉ်က၏တန်ဖိုးလျော့နည်းသွားသည် analytics အကြောင်းအရာတခုချင်းကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးငြင်းခုံချင်ပါတယ်။ ငါအတိတ်ထဲမှာရေးသားခဲ့သည် SEO ဆိုတာသေပြီ ငါစက်မှုလုပ်ငန်းတဖြည်းဖြည်းကွယ်ပျောက်သွားသကဲ့သို့ငါစောင့်ကြည့်ပါတယ်။ ဒီအခေါင်းထဲမှာနောက်ဆုံးလက်သည်းဖြစ်နိုင်သည်။
တကယ်လို့ငါပျော်ရွှင်နေရင်အဲဒါကငါဖြစ်လို့ပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းအ ၀ ယ်အလိုအလျောက်ဖောက်သည်များနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းတွင်ရေးသားခဲ့သည်။ ညာဘက်အပြန်အလှန်:
သော့ချက်စာလုံးများအားလုံးကိုခြေရာခံရန်ဂူးဂဲလ်၏လုပ်ဆောင်မှုသည်စျေးကွက်သမားများ၏ဘဝကိုပိုမိုခက်ခဲစေသည်၊ သို့သော်မဖြစ်နိုင်ပါ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အော်ဂဲနစ်အသွားအလာသည်၎င်းတို့၏အ ၀ င်အထွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုနားလည်ရန်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည် Webmaster အချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ ကလစ်နှိပ်ခြင်းနှုန်းကိုစောင့်ကြည့်နိုင်သည်။ ဘာမှမဖြစ်လျှင်, ဒီကျွန်တော်တို့ကိုပိုကောင်းတဲ့စျေးကွက်ဖြစ်စေရန်ဆက်လက်။ သော့ချက်စာလုံးများကိုလိုက်ဖမ်းခြင်း၊ ဆိုက်များကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေမှုအဆင့်ကိုအလိုအလျောက်ကြီးထွားစေရန်လင့်များရှာဖွေခြင်းတို့မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိသတ်အတွက်တန်ဖိုးရှိသောအကြောင်းအရာများရေးသားခြင်းနှင့်ပရိသတ်ကိုနားထောင်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်သင့်သည်။
၎င်းသည်အထူးသဖြင့်ပျမ်းမျှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်သတင်းကောင်းဖြစ်ပြီး SEO တွင်မဟာဗျူဟာများ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်ဘတ်ဂျက်မပါသောအကြောင်းအရာများပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီ။ ကြီးထွားလာသောကြီးမားသောကုမ္ပဏီများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်မယှဉ်နိုင်ပါ။ လှည့်စားခြင်းအတွက်ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်ရှိသည့်နေရာတွင်ကုမ္ပဏီများသည်လိမ်လည်လှည့်ဖျားခံရနိုင်သည်။ နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း cheat (နှင့် cheat နှင့် cheat) ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကစားသမားအများစုသည်သူတို့၏နည်းဗျူဟာများနှင့် ပတ်သက်၍ လှည့်စားတတ်ကြသော်လည်းဂူဂဲလ်မဟုတ်ကြောင်းရှင်းနေပါသည်။ Google ကအော်ဂဲနစ်အသွားအလာကိုအော်ဂဲနစ်ဖြစ်ရန်လိုသည်၊ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာသောသဲအိတ်များရှိသည့်ချမ်းသာကြွယ်ဝသော SEO ကုမ္ပဏီများကမောင်းနှင်။ မရ၊ သူတို့၏ဖောက်သည်များကိုလိမ်လည်လှည့်စားရန်နှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဂူဂဲလ်ရဲ့အပြောင်းအလဲကအဲဒါတွေကိုထိခိုက်စေတယ်၊
သတ်သတ်မှတ်မှတ်သော့ချက်တစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျတဲ့သော့ချက်စာလုံးကိုသင်မဖော်ပြနိုင်သော်လည်း၊ ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုအော်ဂဲနစ်သို့ရောက်ရှိပြီးသူတို့လုပ်ခဲ့သည့်စာမျက်နှာမှသင်သိရှိနိုင်လိမ့်မည်။ ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းစာမျက်နှာ၏ခေါင်းစဉ်ကိုသိခြင်းဖြင့်သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်သို့သင်ရောက်ရှိနိုင်မှုသည်တန်ဖိုးကိုပေးသောအကြောင်းအရာကိုပိုမိုနားလည်ရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်သော့ချက်စာလုံးသုတေသနနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာသုတေသနပြုလုပ်ခြင်းသည်တွေ့ရှိရပြီးတန်ဖိုးရှိမည့်အပိုဆောင်းအကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ရေးသားခြင်းအတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုဖော်ထုတ်နိုင်သေးသည်။ Search optimization သည်မည်သည့်အကြောင်းအရာဗျူဟာအတွက်မဆိုအခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာများကိုရေးသားခြင်းနှင့်ဝေမျှခြင်း (စာဖြင့်ရေးသား၊ အပြောနှင့်အမြင်အာရုံ) သည်စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်များသို့မဟုတ်စာလုံးများ၏သိပ်သည်းဆသိပ်သည်းဆများသည်စာမျက်နှာတစ်ခု၏စာမျက်နှာထက် ပို၍ သာလွန်လိမ့်မည်
Webmaster အချက်အလက်များ၊ ပါဝင်သည့်အချက်အလက်များနှင့် Analytics အချက်အလက်များအကြားပေးသောကွာဟချက်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာများကိုဖွံ့ဖြိုးရန်သင်၏စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်သင့်သည်။ ၏သော့ချက်စာလုံးအပိုင်းသို့ခုန်မည့်အစား analyticsသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်မည်သည့်ဆောင်းပါးသည်မည်သည့်ဆောင်းပါးများကိုပေးသည်ကိုနားလည်ရန်၊ စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်ဖြင့်အသွားအပြန်ထဲကိုသင်ဝင်ရောက်သင့်သည်။ သော့ချက်စာလုံးများသည်အာရုံပျံ့လွင့်ပြီးစျေးကွက်သမားများစွာကိုပျင်းရိစေသည်။ သူတို့ကအာရုံစူးစိုက်မှုကိုအများဆုံးဆွဲဆောင်သောအကြောင်းအရာတစ်ခုလုံးကိုအာရုံစိုက်မည့်အစားသော့ချက်စာလုံးများကို အခြေခံ၍ ပိုမိုသောအသွားအလာကိုမောင်းနှင်ရန် crap ကိုသာရေးသားခဲ့သည်။
အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာဗျူဟာကိုတီထွင်ဖို့သင့်စွမ်းရည်မှာအပေါက်တစ်ခုကျန်နေစေတဲ့အချက်အလက်တွေတကယ်တော့မရှိဘူး။ အကြောင်းအရာအများစုကိုမောင်းနှင်နေသောသော့ချက်စာလုံးများကိုနားလည်ရန် Webmaster အချက်အလက်များကိုသင်ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုအမြင်များနှင့်ပြောင်းလဲမှုများကိုအများဆုံးမောင်းနှင်နေသောအကြောင်းအရာနှင့်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်ရေးသားနေသည့်သော့ချက်စာလုံးများပတ် ၀ န်းကျင်အခြေအနေကိုနားလည်ခြင်းသည်လူကြိုက်များခြင်းနှင့်လူကြိုက်များခြင်းများကိုပိုမိုသိရှိနိုင်သည်။
ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့် 'google သော့ချက်စာလုံးများမထောက်ပံ့ပါ' ကိုအာရုံစိုက်ခြင်းကလမ်းကြောင်းနှင့်အခြားဖြေရှင်းနည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ blog post အနည်းငယ်သို့ကျွန်ုပ်ကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။ အဲဒီအစားစျေးကွက်ကိုဘယ်လိုကူညီမယ်ဆိုတာကိုဒီမှာအာရုံစိုက်ထားတယ်။ နောက်ဆုံးတွင်သောအခြေအနေသည်သော့ချက်ကျသောစကားလုံးပေါင်းများစွာကိုပစ်ချခြင်းထက်ကျွန်ုပ်၏အကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာအတွက် ပို၍ အဖိုးတန်ကြောင်းသက်သေပြသင့်သည်။ သင်၏သော့ချက်စာလုံးများပတ်လည်ရှိအခြေအနေသည်သင်၏အာရုံကိုအဓိကထားသင့်သည်။
သတိပြုသင့်သည်မှာအချို့ Analytics ပေးသူများကလည်းဤနည်းကိုကျင့်သုံးနေသည်။ GinzaMetrics ထွက်စစ်ဆေး GinzaMetrics ပလက်ဖောင်း၏လိပ်စာအသစ်များဂူဂဲလ်၏လုံလုံခြုံခြုံရှာဖွေမှု (သော့ချက်စာလုံးမဟုတ်ပါ) အသစ်ပြောင်းခြင်း.
Tags: analytics googleGoogle သော့ချက်စာလုံးများသော့ချက်စာလုံးမထောက်ပံ့ပါပေးမပေး
10:2013 pm တွင်အောက်တိုဘာ 8, 59
ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်က Raven ရဲ့ keyword tracker ကိုငါပြန်သတိရစေတယ်။ ကျွန်တော့်စားပွဲတစ်လျှောက် SEO SEO ကောင်မှာငါ့ site အတွက်ကောင်းတဲ့အကြံဥာဏ်တွေရှိတယ်။ တစ်ခုမှာ Webmaster ထံမှရှာဖွေရေးဝေါဟာရများသည်အော်ဂဲနစ်နည်းလမ်းများဖြင့်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာသို့ရောက်သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်မဟာဗျူဟာသည်သူ၏အဆိုအရသူ၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုအာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Analytics မှဝင်လာသောရှာဖွေရေးဝေါဟာရများကိုပယ်ဖျက်လိုက်သောကြောင့်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ကိုင်နိုင်သောအဖြေများရှိသည်။
11:2013 pm မှာအောက်တိုဘာ 12, 41
ဒီ post အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အတိုချုပ်နားလည်ရန်နှင့်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အချိန်ယူပါ။ ရလဒ်ကောင်းတစ်ခုရရန်မမျှော်လင့်သောနည်းလမ်းများရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
11:2013 pm မှာအောက်တိုဘာ 8, 44
ငါတကယ်ဖတ်ကောင်းတဲ့အချိန်လေ .. အရမ်းသိကောင်းစရာကောင်းတယ်။ ဝေမျှလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
15:2013 pm မှာအောက်တိုဘာ 9, 58
ငါ 100% သဘောတူသည် SEO သည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှမွေးဖွားခဲ့ပြီးဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကိုနားမလည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဂူးဂဲလ်သည်ကစားကွင်းအဆင့်ကိုမြှင့်တင်နေသည်။ ဤသည်မှာအင်တာနက်စျေးကွက်သို့ပြန်လည် ၀ င်ရောက်ခြင်း၏အစဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးသောစျေးကွက်များ၌ပျမ်းမျှအားဖြင့် SEO ကုမ္ပဏီများ ၁၀၀၀ ရှိသည်။ သို့သော်သူတို့သည် SEO ကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ SEO ဆိုသည်မှာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။ SEO ဆိုသည်မှာအထက်တန်းလွှာအတွင်းမှသာကျွမ်းကျင်နိုင်သည့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းစဉ်မဟုတ်ပါ။ SEO ကုမ္ပဏီများသည်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကိုသင်ယူရန်ဖိအားပေးခံရလိမ့်မည်။
SEO ကို Spook
ဇန်နဝါရီ 19, 2014 မှာ 11: 27 AM
ဟုတ်ကဲ့! ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၏သော့ချက်စာလုံးများကဏ္ section သို့သွားမည့်အစားကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသို့မည်သည့်ဆောင်းပါးများကအများဆုံးအသွားအလာပေးနေသည်ကိုသိရန်စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်ဖြင့်အသွားအလာထဲခုန်ကျော်ဝင်သွားသင့်သည်။ ငါသည်လည်းသော့ချက်စာလုံးများအချို့စျေးကွက်များနှေးကွေးစေတော်မူကြောင်းကိုထင်ကြဘူး အချို့သည်အလွန်အရေးကြီးသောအကြောင်းအရာတစ်ခုလုံးကိုအာရုံစိုက်မည့်အစားသော့ချက်စာလုံးများကို အခြေခံ၍ ပိုမိုသောအသွားအလာကိုမောင်းနှင်ရန်“ အနတ္တ” ကိုသာဆက်လက်ရေးသားကြသည်။
ဇန်နဝါရီ 21, 2014 မှာ 11: 55 AM
ဟုတ်ကဲ့ဒေတာကြီးမြတ်အကြောင်းအရာဖွံ့ဖြိုးနိုင်စွမ်းကိုချွန်ထက်ကူညီသင့်ပါတယ်။ landing စာမျက်နှာများအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် site ည့်သည်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်တွေ့မြင် / ရှာဖွေလေ့ရှိသည့်အရာများကိုပိုမိုအာရုံစိုက်နိုင်သည်။